Root YK-11 Powder (431579-34-9) Soosaarayaal - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker'
Budada YK-11 waxay ka tirsan tahay kooxda qaabab dooriyayaal xasaasiyadeed oo xaddidan (budada YK11). Asal ahaan, waxa YK11 sameeyo waa xulasho ……
Qalabka Root YK-11 (431579-34-9) video
Macmacaanka Root YK-11 (431579-34-9) Sharaxaad
YK11, oo sidoo kale loo yaqaan Myostine, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay midka ugu adag budada YK11 ee suuqa. Waa isku-darka steroidal xulashada androgen receptor modulator. Daawadu waxay ku leedahay firfircoonida anabolic-ga in vitro gudaha C2C12 myoblasts waxayna muujineysaa awood ka ballaaran tan dihydrotestosterone (DHT) ee arrintan la xiriira. YK11 sidoo kale waa xakamaynta Myostatin. Waxay kaa caawin karaan inaad murqaha hesho oo aad dufanka lumiso.
Xashiishka YK-11 (431579-34-9) Smamnuucista
Product Name Kalluunka YK-11
Magaca Kiimikada YK11, (17a, 20E) -17,20 - [(1-Methoxyethylidene) bis (oxy)] - 3-oxo-19-norpregna-4,20-diene-21-karboksilik Acid Methyl Ester; YK11 ((17α, 20E) -17,20 - [(1-methoxyethylidene) bis- (oxy)] - 3-oxo-; DNA (Nooca Terrabejka YK11 16S gene-rrNA gene); GenBank AB070463
Fasalka Daroogada Budada YK11
Molecular Wsideed 430.53386
barafku Psaliid 190-200 ° C
Biological Life-Life Saacadaha 6-10, waxay ku xiran tahay qof ahaan
Kalluunka YK-11 Application Is-beddelka "Androgen Receptor Modulator", "Myostatin Inhibitor"
Root Raw YK-11 budada (431579-34-9)
Isticmaalayaal badan ayaa qaba in YK11 uu yahay furaha furitaanka awooda buuxda ee jirka isla markaana lagu guuleysto kasbashada muruqyada dhakhsaha badan oo leh saameyn yar. Waxa kale oo ay sheegtay in YK11 uu leeyahay awooda lagu yareeyo waxqabadka myostatin, taas oo ka dhigaysa horjoogga myostatin. YK-11 runti waa mid ka mid ah kuwa ugu xooga badan banaanka. Runtii isma barbardhigi kartid YK iyo LGD-4033 ama wixii alaabo kale ah sida ay u kala xoog badan yihiin.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo budada cayriin ee YK-11 ay aad u xoog badan tahay haddana maskaxda ku hay in ay jireen dhowr daraasadood oo lagu sameeyay xaruntaan. Tani waa sababta ugu weyn ee dadka intooda badani u muuqdaan inay doorbidayaan kuwa kale sida Ostamuscle, RAD-140 ama GW-501516.
YK11 waxay ka heleysaa xiisaha jirka jirka sababtoo ah awooda ay si deg deg ah ugu dhisto muruqyada waxyeelada ugu yar.
Mid ka mid ah daraasadaha gacanta ayaa tilmaamaya in YK11 ay kordhinayso muruqyada. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in ay kordhinayso muruqyada dhismaha muruqa (followeratin) (myostatin inhibitor).
YK11 waxay sidoo kale kordhin kartaa caafimaadka lafaha. Daraasad ku saabsan unugyada lafaha, YK11 waxay kordhisay heerarka borotiinka dhismaha lafaha.
Qaar ka mid ah jirka jirka ee tijaabiyay YK11 waxay soo sheegaan muruqyada weyn ee muruqyada weyn iyo baruurta lumisana waxyeelo yar. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax xayawaan ah ama daraasad bani'aadam ah oo ku saabsan YK11 iyo nabadgelyadeeda ma cadda.
Nooca Root YK-11 (431579-34-9) Habka Wax-qabadka
YK11 wuxuu leeyahay qaab dhismeed kiimiko ah oo la mid ah DHT taasna waxaa lagu muujiyay habka ay u xiran tahay soo-qabsiisayaasha xayawaanka. Jirku wuxuu keenaa DHT si dabiici ah ujeedada kor u qaadida caafimaadka prostate, koritaanka timaha, iyo horumarinta qaangaarka haboon.
Cilmi baadhayaashu waxay sameeyeen daraasad unugeed si ay u ogaato sida ay u shaqeyneyso dhisida murqaha. Natiijooyinka ayaa muujinaya inay ujeedadeedu tahay in la kordhiyo heerarka follistatin. Follistatin waa borotiin kale oo dabiici ah oo ku dhaca jidhka bini-aadanka kaas oo ka caawiya in uu kontoroolo myostatin jeeg. Myostatin waa hoormoon oo shaqadeeda ay tahay in la yareeyo kobaca murqaha oo aan la xakameynin.
Ilaa hadda, budada cayriin ee YK11 kaliya ayaa leh awooda lagu xakameeyo myostatin.
Caddeyn dheeraad ah waxay soo jeedinaysaa in YK11 ay sidoo kale kor u qaadi karto kobaca lafaha iyada oo faragalin ku sameeynaysa albaabka u shaqeeya sida DHT.
Faa'iidooyinka oo ah budada Raw YK11 (431579-34-9)
Waxay kordhisaa murqaha
YK11 waxay leedahay awood aan caadi aheyn si ay u kiciso koritaanka muruqyada.
Taasi waa sababta oo ah dabiici ahaan waxay kordhineysaa heerarka follistatin taas oo kor u qaadeysa awooda jidhkaaga ee aad ku sameyso unugyada muruqyada. Follistatin ayaa sidoo kale mas'uul ka ah xakamaynta myostatin, sidaas awgeedna aad u fureyso suurtogalnimada koritaanka muruq la'aanta ah. Hase yeeshee, haddii dhibaatooyinka lugta ee walwalka ah la joojiyo si kastaba ha ahaatee, mamnuucista myostatin ma dhici karto, taasoo keeni doonta YK11 waxtar la'aan.
Looma baahna in uu u ekaado sida rikoor jebis ah, laakiin ma jiraan wax daraasad aadane ah ama xayawaan ah si loo soo celiyo xogta ku jirta dhismahan
Dhammaanteen waxaan leenahay caddaynta anecdotal ee ku salaysan dib-u-eegista jirka ee dib-u-eegista internetka. Waxa ay noo sheegaan waa inay awoodaan in ay dareento hoos u dhigista dufan ee muhiimka ah iyo qiimaha 15 ee qiimaha muruqa caanaha ah muddo gaaban.
Waxay xoojisaa lafaha
Hoormoonada galmada waxay muhiim u yihiin joogtaynta lafaha adag oo caafimaad qaba. Caddaynta la hayo ayaa muujineysa in budada cayriin ee YK11 ay kordhin karto xoogga lafaha iyaga oo isku xidhaya kuwa qaata androgenic.
YK11 ayaa sidoo kale kordhin karta qadarka PKB ee firfircoon (protein kinase B) oo ku jirta unugyada jirka kaas oo fududeynaya kobaca unugyada lafaha.
Ha ilaawin inaad rabto inaad yeelato muruqyo xoog leh, murqo caafimaad leh iyo lafo si aad isaga ilaaliso jabka. Waxaa laga yaabaa inay ku caawin karto arrintan xataa sababtoo ah waxay waxtar badan u tahay dhisidda murqaha, taageeridda lafaha caafimaad iyo yaraynta saameynta lafaha lafaha.
Nooca la yiraahdo budada YK-11 (431579-34-9)
Joogtada jirka ee isticmaalay budada cayriin ee YK11 waxay yiraahdaan ku qaadashada qiyaasta 10 illaa 15 mg maalin kasta waxay u fiicantahay iyaga. Kuwa kale waxay soo sheegeen saameynta togan ee 5 mg maalin kasta. Isticmaalayaasha badankood waxay ku wareegaan 4 illaa 8 toddobaad.
Dhibaatooyinka soo raaca ee budada Raw YK-11 (431579-34-9)
▲ Ilaa hadda, daraasadaha gacanta oo kaliya ayaa lagu qabtay YK11.
Ma jirto caddaynta bukaan-eegtada ama xitaa daraasaadka xayawaanka si loo soo celiyo mid ka mid ah sheegashooyinka la sameeyey ee ku saabsan daroogada.
Tani waxay kaa dhigeysaa inaad laba jeer ka fikirto cilmi baaristan. Waxaa laga yaabaa in aad iska hubiso xeryaha kala duwan sida Ostarine iyo Ligandrol. Waxay hayaan macluumaad badan oo cilmi baaris ah oo la heli karo.
Waxaa la yiraahdaa YK11 waxay noqon kartaa sunta sunta. Waxaa macquul ah in la hadlo, waxay saameyn kartaa koritaanka timaha, xarigga codka, caafimaadka prostate iyo xubnaha kale ee muhiimka ah ee jidhka.